Home > News > Food အလုပ်အင်မတန်များသူတွေအတွက် စားသောက်မ*
Food အလုပ်အင်မတန်များသူတွေအတွက် စားသောက်မ*
အလုပ်အင်မတန်များသူတွေအတွက် စားသောက်မှု မျှတစေဖို့
စိတ်ဖိစီးမှုလွန်ကဲပြီး အနားယူမှုပါ နည်းပါးနေမယ်ဆိုရင် ကျန်းကျန်းမာမာနေနိုင်ဖို့ကတော့ ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေပဲ အသုံးပြုမယ်ဆိုတာ တွေးထားသင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စွာ စားသောက်ခြင်းရဲ့ အဓိကသော့ချက်ကတော့ မျှမျှတတ၊ အမျိုးအစားစုံစုံလင်လင်နဲ့ အသင့်အတင့်လုံလောက်စွာ စားသောက်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျဉ်းချုံးပြောရရင်တော့ ကယ်လိုရီ အများကြီးမရစေဘဲ၊ ဒါမှမဟုတ် အာဟာရတစ်မျိုးတည်း အများအပြားမပါစေဘဲ စုံလင်စွာ စားသောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကို ပုံမှန်အနားယူမှုမပေးနိုင်ဘဲ အင်မတန်ကိုအလုပ်များတဲ့အလုပ်မှာ စီမံခန့်ခွဲနေရတဲ့သူတစ်ယောက် ဆိုရင် အခုပြောမယ့်စားသောက်မှုပုံစံတွေကို လိုက်နာရုံမကဘဲ သင့်လိုလူမျိုးတွေကိုလည်း မျှဝေပေးပါ။
ကယ်လိုရီဘယ်လောက်လိုအပ်လဲဆိုတာ သိထားဖို့ လူတစ်ယောက်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ လိုအပ်မှုကတော့ တစ်ရက်ကိုပျမ်းမျှ ၁၈၀၀ ကယ်လိုရီပါ။ အဲဒီကယ်လိုရီပမာဏကို အခြေခံပြီး အလေးချိန်လျှော့တာ၊ တက်တာ စတဲ့ အလေးချိန် ထိန်းညှိတာတွေကို ပြုလုပ်ရမှာပါ။ ဘယ်အစား အသောက်က သင့်လိုအပ်မှုမှာ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာကို အစား အသောက်နဲ့ အာဟာရပညာရှင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
အသီးအနှံတွေမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးရှိစေတဲ့ အမျှင်ဓာတ် တွေ၊ ဗီတာမင်တွေနဲ့ ဗညအငသထငိညေအ တွေ အများအပြား ပါဝင်ပါ တယ်။ အစာအိမ်ကို မြန်မြန်ပြည့်သွားစေပါတယ်။ ကယ်လိုရီပါ ၀င်မှုနည်းတဲ့အတွက် ကယ်လိုရီစားသုံးမှုလျှော့ချရာမှာလည်း အ ထောက်အကူပြုပါတယ်။ သစ်သီးတွေကို တစ်နေ့သုံးလေးကြိမ် အ နည်းဆုံး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို လေးကြိမ်ကနေ ငါးကြိမ်လောက် အနည်းဆုံးစားသုံးသင့်ပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့အသီးအနှံတွေကို ကြိုက် နှစ်သက်သလိုစားသုံးနိုင်ပြီး သစ်သီးဖျော်ရည်ကိုလည်း မမေ့ပါနဲ့။
၃ စားသောက်မှုအချိုးအစားကို ထိန်းပါ
သင့်တင်တဲ့ပမာဏသာ စားသောက်ပြီး အဲဒီအချိုးအစားကို ထိန်းသိမ်း ထားမယ်ဆိုရင် စားချင်တဲ့ အစားအသောက်ကိုစားပြီး ကျန်းမာဖို့အ တွက် ပိုမိုလွယ်ကူစေပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်အများစုဟာ ဟင်းပွဲ တစ်ပွဲကို နှစ်ယောက်သုံးယောက်စာ ပြင်ဆင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အစားအသောက်တွေကို ကုန်စင်အောင် စားပစ်ဖို့မကြိုးစားဘဲ ပိုလျှံ သွားတာတွေကို ပါဆယ်ထုပ်သွားသင့်ပါတယ်။
၄ မနက်စာကို သေချာစားသုံးပါ
ဦးနှောက်ရဲ့အဓိကစွမ်းအင်ရင်းမြစ်က ဂလူးကို့စ်ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုဖို့အတွက် စုဆောင်းထားတာမျိုး မရှိပါဘူး။ မနက်စာစားသုံးတာက တစ်နေ့တာလုံးမှာ ကောင်းမွန်စွာ အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပြီး ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းကိုလည်း တိုးတက်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မနက်စာကို မစားသုံးတဲ့သူတွေထက် ကယ် လိုရီနဲ့အဆီကို တစ်နေ့တာလုံးအတွက် နည်းနည်းသာစုပ်ယူဖို့ လိုပါတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေက တွေ့ရှိရပါတယ်။ မနက်စာ စားလေ့မရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့ ဒိန်ချဉ် တစ်ခွက်ဖြစ်ဖြစ်၊ အသီးအနှံတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်ဖြစ် စတာတွေကနေ အလေ့အကျင့်စလုပ်သင့်ပါတယ်။ အဆီအများအပြားပါတဲ့ အသားတွေ၊ အကြော်တွေ စတဲ့ မနက်စာအလွန်အကျွံစားသုံးမှုကိုတော့ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
၅ နေ့လယ်စာကို အချိန်ယူ၍ မျှမျှတတစားပါ
အလုပ်တအားများသူအတွက် နေ့လယ်စာဟာ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာပဲ ဖြစ်သလို စားဖြစ်သွားတဲ့အခါတွေရှိပါတယ်။ အနားယူဖို့အချိန်ဟာ အရေးကြီးသလို နေ့လယ်စာစားဖို့အတွက် အချိန်ယူတာဟာလည်း မရှိမဖြစ်လိုပါတယ်။ ဘာ ကြောင့်လဲဆိုတော့ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ အလုပ်လုပ်ရင်းစားမယ်ဆိုရင် အလုပ်ထဲမှာ စိတ်ရောက်နေပြီး အစားအစာပေါ် အာရုံမထားမိတော့တဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်က ဗိုက်ပြည့်တာကိုမသိတော့ဘဲ ဆက်စားမိနေတဲ့အခါ ကိုယ်အလေးချိန်တွေ တက်လာ တတ်ပါတယ်။ အချိန်သီးသန့်ယူပြီး စားသောက်တဲ့အခါမှာလည်း ပရိုတိန်းဓာတ်များများ၊ အသီးအရွက်များများ၊ အာဟာရမျှမျှ တတ စားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ခွန်အားနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်း ထိန်းထားရာ ရောက်ပါတယ်။
၆ ပါဝင်တဲ့ပမာဏတွေကို နားလည်ပါ
အဆီမပါတဲ့အစားအစာလို့ ရေးထားပေမဲ့ ကယ်လိုရီ နည်းနည်းသာပါ တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ထို့အတူ သကြားဓာတ်နဲ့ ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ် ပါဝင်မှု နည်းတယ်လို့ ရေးထားတာကလည်း အဆီနဲ့ကယ်လိုရီနည်းတယ်လို့ မဆို လိုပါဘူး။ ထုပ်ပိုးထားတဲ့အရာမှာရေးထားတဲ့ အာဟာရပမာဏတွေကို အမြဲ ဖတ်ပါ။
၇ လျှော့စားပါ။ လုံးဝမစားတာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့
လူအများစုဟာ အာဟာရအတွက်သာမက ပျော်ရွှင်မှုအတွက် လည်း စားသုံးတတ်ကြပါတယ်။ အကြိုက်ဆုံးအစားအစာတွေကို လုံးဝမရှောင်သင့်ပါဘူး။ စိတ်အလို လိုက်တဲ့အခါမှာ ပမာဏ နဲ့အကြိမ်အရေအတွက်တော့သတိထားပါ။ သင်ကြိုက်တဲ့အ စားအစာနည်းနည်းပဲ စားသုံးတာဟာ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ တဲ့အခါ အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ အကြိုက်ဆုံးအစားအစာ ကို လုံးဝဖြတ်လိုက်တာဟာ တစ်ချိန်မှာ အများကြီး စားလိုက် နိုင်ပါတယ်။ မလိုင်၊ ဒါမှမဟုတ် အဆီနည်းတဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ အသားတွေကို စားသုံးတာကလည်း အဆီစားသုံးမှုကို လျှော့ ချနိုင်ပါတယ်။ ကြက်ကြော် တအားကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း အကြိမ်အရေအတွက်ကို ပုံမှန်ထက်လျှော့စားပါ။ ဆိုင်မှာစား ရင်လည်း သူငယ်ချင်းနဲ့အတူ စားတာဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ကို ပါ ဆယ်ထုပ် ပြန်သယ်တာဖြစ်ဖြစ် လျှော့စားသင့်ပါတယ်။
၈ အချိုရည်နဲ့ ကဖင်းဓာတ်ပါတဲ့အရည်တွေကို ထိန်းပါ
ဖျော်ရည်၊ ကရင်မ်နဲ့ သကြားတွေပါဝင်တဲ့ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်တွေ အားလုံး ပေါင်းလိုက်ရင် အရည် ရှစ်ခွက်ကနေ ဆယ်ခွက်လောက် သောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ အရည်ဓာတ်ကို ဖြည့်ပေးရုံသာမက ဆာလောင်မှုကိုလည်း လျော့စေပါ တယ်။ များသောအားဖြင့် မနက်စာကို သေချာမစားဘဲ ကော်ဖီကိုသာ သောက်သုံး ကြပါတယ်။ လူတွေဟာ လန်းဆန်းသွားစေတဲ့ ကဖင်းဓာတ်ကို မှီခိုလာကြပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ အချက်ကတော့ ဒီလိုလန်းဆန်းစေတာဟာ ခဏပဲခံပြီး လန်းဆန်းမှုကို လျော့ကျသွားကာ ကဖင်းဓာတ်ကို ပိုလိုလာစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကဖင်းဓာတ်ဟာ ဆဲလ်တွေထဲက အရည်ကိုဆွဲယူပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေဓာတ်ခန်းခြောက်စေပါတယ်။ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်တဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုလျော့နည်းသွားတာ၊ စိတ်တိုလာတာတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကဖင်းပါတဲ့ အရည်တွေကို တစ်နေ့တစ်ခွက်လောက်သာ သောက်သုံးပြီး ရေကိုသာ များများသောက်သင့်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအတွက် တစ်နေ့ကို မိနစ် ၃၀ ကနေ မိနစ် ၄၀ လောက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာ နှစ်ကြိမ်လောက် ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ထပ် ပေါင်းပြီး မလိုအပ်တဲ့ကယ်လိုရီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေလိုက်ပါ။
ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ဖို့အတွက် အာဟာရပေါင်း အမျိုး ၄၀ ကျော်လောက် လိုအပ်ပါတယ်။ အစားအစာတစ်ခုထဲက အာဟာရပေါင်းစုံမပေးနိုင်တဲ့အတွက် သင့်တစ်နေ့တာ အစားအသောက်ထဲမှာ အသား၊ ငါး၊ ပရိုတိန်းဓာတ် ကြယ် ၀တဲ့ အစားအစာတွေ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ အသီးအနှံဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ စတဲ့ အစားအသောက်မျိုးစုံကို ကယ်လိုရီလိုအပ်မှုနဲ့ကိုက်ပြီး စားသောက် ပါ။
၁၁ လတ်ဆတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုသာ စားပါ
လတ်ဆတ်တဲ့အစားအစာတွေကို ၀ယ်ယူစားသုံးပြီး ပြင်ဆင်ထုပ်ပိုးထားတဲ့ အရန်သင့်အစားအသောက်တွေကို ရှောင်ကြဉ်စားသောက်သင့်ပါတယ်။ အရန် သင့်အစားသောက်တွေဟာ ဆိုဒီယမ်နဲ့ အဆီပါဝင်မှုနှုန်းများလို့ပါ။ အပြင်က အစားအသောက်တွေမစားဘဲ အိမ်မှာချက်ပြုတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကို စားပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုတာ အံ့သြစွာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
၁၂ စပါး၊ ပဲ၊ ပြောင်း၊ ဂျုံတွေလည်း မမေ့ပါနဲ့
ပေါင်မုန့်၊ ဆန် စတဲ့အစားအသောက်တွေလည်း စားသောက်သင့်ပါတယ်။ ဒီဂျုနဲ့ စပါး အခြေခံတဲ့ အစားအသောက်တွေမှာ အဆီနဲ့ ကယ်လိုရီပါဝင်မှု နည်းပါးပါတယ်။
၁၃ နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေလည်း မမေ့ပါနဲ့
တစ်နေ့တာကယ်လ်စီယမ်လိုအပ်မှုကို ဖြည့်တင်းဖို့အတွက် နို့၊ ဒိန်ချဉ်၊ ချိစ် စတဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ အဆီဓာတ်နည်းတဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို စားသုံးပါ။
၁၄ နပ်မှန်အောင် စားပါ
အစာကို နည်းနည်းနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်စားသုံးတာက ကယ်လိုရီစားသောက်မှုပမာဏကို ညီမျှစေတဲ့အပြင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ တစ်နေ့သုံးကြိမ်ကို ပမာဏများများစားမယ့်အစား ငါးကြိမ်ခြောက်ကြိမ်ကို နည်းနည်းသာ စားသင့်ပါတယ်။
၁၅ အစားအစာကို အခြေအနေလိုက်ပြီး မျှတအောင် စားပါ
အစားအသောက်တိုင်းက ဏနမ်နခအ ဖြစ်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ အဆီဓာတ်၊ သကြားဓာတ်များတဲ့အစားအသောက်တွေ စားမိရင် အခြားအစားအစာတွေမှာ အဲဒီဓာတ်တွေနည်းတာကို စားသောက်ပါ။ ဒီနေ့မှာ အာဟာရအုပ်စုတစ်ခု မစားမိလိုက်ရင် နောက်နေ့မှာ ပြန်ဖြည့်စားပါ။ စားသောက်ရာမှာ ရက်ဖြည့်စားပြီး မျှတတဲ့စားသောက်မှုပုံစံဖြစ်အောင် ကျင့်ယူပါ။
မျှမျှတတ စားသောက်တော့မယ်ဆိုရင် စားသောက်မှုပုံစံပြောင်းတဲ့အခါ လုံးဝတစ်ခါတည်း မစားတော့တာမျိုး မဖြစ်ပါနဲ့။ အဆီ ဓာတ်များတဲ့ ကရင်မ်တွေအစား နို့၊ အဆီဓာတ်နည်းတဲ့ Mayomaise လိုမျိုး ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။
အရေးကြီးဆုံးကတော့ A သုံးလုံးပါ။ Adjust ထိန်းညှိ စားသောက်ပါ။
Adop ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းနဲ့ စားသောက်ပါ။ Accomodate လိုက်လျောညီထွေ စားသောက်ပါ။
ချမ်းသာမှုနဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့သူတွေ ဘယ်တော့မှ လုပ်လေ့မရှိတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အမှား ၁၀ ခု
ပိုက်ဆံနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှားလုပ်မိတာမျိုး မရှိရလေအောင် အမှား ၁၀ ခုအကြောင်း ရေးသားပေးထားပါတယ်.။ (5 Mins Read)ပိုက်ဆံကို အကျိုးရှိရှိ စီမံခန့် ခွဲနိုင်ခြင်းဟာ အလွန် အရေးပါပြီး ခက်ခဲလှတဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံကို သုံးရတာက လွယ်ပါတယ်။ ဘယ်သူ မဆို ပိုက်ဆံကို သုံးတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကျိုး ရှိရှိ သုံးတတ်ဖို့ ဆိုတာ အလွန်ပဲခဲယဉ်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ငယ်ရွယ်စဉ် တိုးတက်ဖို့ အလားအလာ ရှိနေတဲ့ အချိန်အခါမှာ ပိုပြီးမှ ခဲယဉ်းပါတယ်။ အတတ်ပညာတွေ ရှိလာလို့ ပိုက်ဆံကို ရှာဖွေနိုင်လာတဲ့ တတ်သစ်စ အရွယ်မှာ ပိုက်ဆံကို အကျိုးရှိရှိ စီမံခန့် ခွဲနိုင်ဖို့ ရာ အင်မတန်ပဲ လိုအပ်လှပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမှ မဟုတ်ယင်တော့ လူချမ်းသာ တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ ခဲယဉ်းသွားပြီး သာမန် အလယ်အလတ် လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ပဲ ရပ်တည်သွားပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာ ရေးမယ် အချက် ၁၀ ချက်ကတော့ ချမ်းသာမှု နဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ ကမ္ဘာကျော် သူဌေးကြီးတွေရဲ့ ပိုက်ဆံကို ဘယ်လို အကျိုးရှိရှိ စီမံခန့် ခွဲ လေ့ ရှိသလဲ ဆိုတာကို ရေးထားတာပါ။၁။ သူတို့ ဟာ ဘယ်သောအခါမှ ပိုက်ဆံကို အလွန်အကျွံ မသုံးပါဘူး။ သူတို့ ရှာဖွေနိုင်မှုထက် နိမ့်တဲ့ အဆင့်တစ်ခုမှာပဲ သူတို့ နေပါတယ်။ အဲ့ဒါဟာ အလွ...
အလုပ်ထဲမှာ ဘယ်တော့မှ မပြောသင့်တဲ့ စကား (၇) ခွန်း
စကားဆိုတာ အလွန် အားကြီးပါတယ် ။ အလုပ်ထဲမှာ မပြောသင့်တဲ့ စကားတွေ ပြောမိရင် အလုပ်ပြုတ်တဲ့ အထိတောင် အခြေအနေ ဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်ထဲမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ တိုးတက်မှုတွေ ရချင်ရင်တော့ ဒီစကား (၇) ခွန်းကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။၁။ "ဒီအလုပ်က ကျွန်တော်နဲ့ မဆိုင်ဘူးလေ..."- သူဌေးက သင့်ကို အလုပ်နဲ့ပက်သက်တာ တစ်ခုခုမေးလိုက်ချိန်မှာ ဒီလို ပြန်မပြောသင့်ပါဘူး။ သင့်ကို မေးတယ်ဆိုကတည်းက သင်နဲ့ သက်ဆိုင်လို့ပါ။ တကယ်လို့ သူဌေးမေးတဲ့ အချက်ကို သေချာမသိဘူးဆိုရင် အဲဒိအလုပ်ကို လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်သမားတစ်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းပြီး ကြိုးစားရှင်းပြသင့်ပါတယ်။၂။ "ငါ လုပ်နိုင်သလောက်တော့ လုပ်ထားတာပဲ..."- ဒီစကားက သင့်အတွက်တော့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ အနာဂတ် တက်လမ်းတွေကို ဒီစကားက ကန့်သတ်ထားပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်မှာ အခုထက် ရလာဒ်ကောင်းတွေထွက်အောင် ကြိုးစားနိုင်ရမယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိန်ခေါ်နေဖို့ လိုပါတယ်။၃။ "ငါ့မှာ အချိန်မရှိဘူး..."- အလုပ်ထဲမှာ အချိန်မရှိတာကိုပဲ အကြောင်းပြနေလို့ မရပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေမှာ အချိန်မှီပြီးအောင်လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကြောင့် သင့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။၄။ "လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်...
အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း ကြုံတွေ့ရမယ့်/ရှိထားရမယ့် ၁၀ ချက်
၁ . အနာဂတ်ကို ကြိုတင်စိတ်ကူးယဉ်ထားရပါမယ်ကိုယ့်လုပ်မယ့် အလုပ်ဟာ နှောင်လာမယ့် နှစ်တွေအတွင်း ဘယ်လောက်ကြီးထွားလာမယ် ၊ ဘယ်လိုပြောင်းလဲ သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ ကြိုတင်စိတ်ကူးယဉ်ထားဖို့လိုပါတယ် ။ အနာဂတ်အတွက် ကိုယ့်စီမှာ စိတ်ကူးကောင်းကောင်းရှိမှ အိပ်မက်တွေကို အကောင်ထည်ဖော် တည်ဆောက်နိုင်မှာပါ ။၂ . အကောင်းမြင်စိတ် မွေးထားနိုင်ရမယ်အဆိုးအကောင်း ဒွန်တွဲတာ သဘာဝဆိုပေမယ့် လူတော်တော်များဟာ အကောင်းမြင်စိတ် မွေးဖို့ အတော်လေး ခက်ခဲတယ် ။ လုပ်ငန်းသဘောမှာ အဆိုးမြင်စိတ်တွေများနေမယ်ဆိုရင် အမှားတွေတိုးလာနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်လာစေပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်လုပ်ငန်း အောင်မြင်ဖို့အတွက် ရေရှည်ရှေးရှုထားတယ်ဆိုရင် အကောင်းမြင်စိတ်ရှိဖို့ဟာ အလွန်အရေးကြီးတယ် ။၃. အရှုံးတွေကို ရင်ဆိုင်ရဲရပါမယ်အောင်မြင်တဲ့လူတိုင်း ၊ ကျရှုံးဖူးပါတယ် ။ ဆိုလိုချင်တာက လူတိုင်းကျရှုံးခြင်းကိုရင်ဆိုင် ရပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ပျက် မသွားဖို့တော့လိုတယ် ။ အရှုံးထဲက သင်ခန်းစာရှာပြီး ရှေ့ ဆက်ဖို့ အားသစ်တွေ ရှိနေရပါမယ် ။၄ . ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာအားကောင်းရပါမယ်ကိုယ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်ရင် ခရီးထွက်သင့်ရင်လည်း ထွက်ရပါမယ် ။ ဒေသတစ်...
အ​လုပ်​သစ်​ရဲ့ ​ပ​ထ​မ​ဆုံး​နေ့​ရက်​တွင် ​ရင်​ခုန်​သံ​မှန်​စေ​ချင်
အ​လုပ်​သစ်​ရဲ့ ​ပ​ထ​မ​ဆုံး​နေ့​ရက်​တွင် ​ရင်​ခုန်​သံ​မှန်​စေ​ချင် ကျ​နော်​တို့​အား​လုံး​ဟာ ​ဘွဲ့​ရ​ကျောင်း ​ဆင်း​ကာ​စ​မှာ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ်၊ ​ဒီ​အ​လုပ်​က​နေ ​နောက်​အ​လုပ်​ပြောင်း​တဲ့​အ​ချိန်​မှာ​ပဲ ​ဖြစ်​ဖြစ် ​အ​လုပ်​နေ​ရာ​အ​သစ်​တစ်​ခု​ကို ​မ​ဖြစ်​မ​နေ​ရောက်​ကြ​ရ​ပါ​တယ်။ ​အ​လုပ်​အ ​သစ်​မှာ ​ဘယ်​နေ​ရာ​ကို​ပဲ​ကြည့်​ကြ​ည့်​အား ​လုံး​ဟာ ​ကိုယ်​နဲ့​မ​သိ​သေး​တဲ့ ​သူ​စိမ်း​တွေ ​ချည်း​ပါ​ပဲ။ ​ဒီ​တော့ ​လူ​တွေ​တွေ့​လျှင် ​လိုက်​ပြုံး​ပြ ​လိုက်၊ ​မျက်​နှာ​ငယ်​လေး​နဲ့ ​ဟို​ကြ​ည့်၊ ​ဒီ​ကြည့်​လုပ်​လိုက်၊ ​စာ​ရွက်​စာ​တမ်း​တွေ ​ဟို​ဒီ​လှန်​လှော​ကြည့်​လိုက်​နဲ့ ​ယောင်​ချာ​ချာ ​ဖြစ်​နေ​ရ​ပါ​တယ်။ ​ဒါ​ဟာ ​အ​လုပ်​သစ် ​စ​ဝင် ​ဝင်​ချင်း​နေ့​ရက်​တစ်​ခု​ရဲ့ ​ရင်​ခုန်​သံ​စစ်​စစ်​တွေ ​ပါ​ပဲ။ ​ဒီ​လို​ဖ​ရို​ဖ​ရဲ​ရင်​ခုန်​သံ​တွေ​နဲ့​တော့ ​သင့်​ရဲ့ ​အ​လုပ်​သစ်​ရဲ့​ပ​ထ​မ​ဆုံး​နေ့​ရက်​ကို ​ကျော်​ဖြတ်​ရ​မယ်​ဆို​လျှင် ​စိတ်​က​သိ​က ​အောက်​ဖြစ်​စ​ရာ​ကောင်း​ပါ​တယ်။ ​ဒီ​တော့ ​အ​လုပ်​သစ်​ရဲ့​ပ​ထ​မ​ဆုံး​နေ့​ကို ​ရင်​ခုန်​စိတ်​လှုပ်​ရှား​စွာ​နဲ့ ​မ​ဟုတ်​ဘဲ ​စ​မတ် ​ကျ​ကျ​ဖြတ်​ကျော်​နိုင်​စေ​မယ့်​နည်း​လမ်း ​ကောင်း​လေး​တ​ခ...
Company က သင့်အတွက် သင့်တော်ခြင်း ရှိ-မရှိ အမြန)
သင်ဟာ အလုပ်တစ်ခုလိုက်ရှာတဲ့အခါ သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင် ဖြစ်လာနိုင်သူရဲ့ သင့်အပေါ်ထင်မြင်ချက်ကို အလွယ်တကူ လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာပါးနပ်ချက်ချာရဲ့လား။ သင့်မှာ လု)...
သတိထားသင့်တဲ့ အခြေခံ အချက် (၅) ချက် Own Business
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး စလုပ်မယ့်သူများ သတိထားသင့်တဲ့ အခြေခံ အချက် (၅) ချက် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ စဉ်းစားမိနေပြီလား၊ ဝန်ထမ်းဘဝကို စိတ်ကုန်နေပြ...